HeersareMuxumed: Askarigii Sharafta la hoyday oo qoyskiisii deeq ay ku farxeen la gaadhsiiyey.
Askarigii Sharafta la hoyday oo qoyskiisii deeq ay ku farxeen la gaadhsiiyey.
Wuxuu ahaa askari ay geeridiisu dad badan taabatay. Shaqadiisa oo uu ku fiicnaa, dadka oo uu si fiican ula dhaqmi jiray, xilkasnimo iyo aqoon uu u lahaa shaqada uu qabanayey ayaa ka dhigtay in laga murugoodo geeridiisa. Ibraahin Faarax Diiriye oo ku magac-dheeraa Kalabaydh wuxuu ka tirsanaa ciidanka nabadgelyada waddooyinka ee Somaliland. Wuxuu ka hawlgeli jiray magaaalada Hargeysa.
Wuxuu ahaa saddex alifle si mug leh looga arki jiray inuu shaqadiisa ku fiicnaa. “Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Muddo dheer ayaan arki jiray kol kasta oo aan xafiiskayga kasoo baxo isagoo dadka tabaalaysan waddada ka tallaabinaya, baabuurtana kala hagaya, shaqadiisana si hufan oo farshaxan leh u gudanaya.” Ayuu yidhi Xamse Xumar-ku-joog oo sifaynayay aqoontii uu lahaa Kalabaydh.
Waxa booqday xaaska iyo carruurta uu Kalabaydh ka geeriyooday oo ka kooban lix carruur ah iyo hooyadood oo hadda uur leh dhalinyaro metelaysay intii lacagta bixisay si ay deeqdaa u soo guddoonsiiyaan, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen Cabdiqaadir Sheekh Maxamuud, Xamse Cumar Ku-Joog, Saddaam Maxamed Axmed iyo Cabdicasiis Caddaani.
Dareenkii ay hooyadaasi ku qaabisay deeqda la gaadhsiiyey ee ka timi dadka ka diir-naxay waxa sharxaya Cabdiqaadir Sheekh Maxamuud: “Wallaashi marxallada ay hadda hooyadaasi ku jirtaa waa mid aad u culus. Waayo, marxuumkii dhintay guriga hanitada ah ee ay galaan mooyee dabadii waxa uu uga tegay ma jirto. Iyaduna waxay hadal nagu tidhi 'Aniga oo ku kalsoon ilaahay qaybkiisa iyo dabadii waxa aanu helayno, haddana waxa aan ka werweray maanta haddii uu dhintay in aanan halanyn cid na siinaysa shan iyo toban kun oo biil ah.' Marxuumkuna intii aanu dhiman carruurtiisa wuxuu ku yidhi 'Aabbo ilaahay ayaan idinkaga tegay.' Markaa wallaahi waa dad u baahan garab-gal iyo hiil.”
Hooyaddaasi markii lacagta loo dhiibay si kal iyo laab ah ayay u ducaysay. “Markii aanu lacagta u dhiibnay aad ayay u faraxday oo aad ayay u ducaysay. Waxaana ay nagu tidhi 'Dadkii ilaahay ee uu nagaga tegay ayaad tihiin.' Markaa qolo naga horraysay ayaa iyaguna $500 doollar gaadhsiiyey. Waxaana ay deggen yihiin jiinqad laba qoqol ah. Markii lacagtaa hore loo geeyey ayay $200 oo ka mid ah jiingad ku soo iibisay oo dayr uga dhigtay guriga si ay carruurta ugu ilaaliso.” Ayuu yidhi Cabdiqaadir Sheekh Maxamuud.
Posted by HeersareMuxumed at 5:54 PM